Onye nnọchi anya mebere | Motadata
Onye nnọchi anya ServiceOps
Jiri mkparịta ụka AI kwalite ahụmịhe onye ọrụ
Megharịa usoro ntinye aka nke onye ọrụ site na deskọdụ enyemaka ọdịnala gaa na akpaaka mkparịta ụka.
Nye obere mmepụta ihe na
Desktọpụ Ọrụ Omenala na-arụ ọrụ n'ụdị Monotonous gụnyere usoro ntuziaka iji rụzuo otu ọrụ. Weghachite ahụmịhe onye ọrụ na azịza ngwa ngwa maka arịrịọ yana mkpebi n'ebe ahụ site na iji Automation ọgụgụ isi. Jiri Bot mkparịta ụka anyị meghee arụmọrụ na-akparaghị ókè.
Mkparịta ụka AI iji wulite ebumnuche dabere njikọ aka
Jiri igwe NLP arụnyere n'ime ya were ike AI mkparịta ụka mee ihe. Belata MTTR site na iji Motadata ServiceOps wulite akụkọ dabere ebumnuche.
Jiri ọgụgụ isi dọkpụrụ na dobe akụkọ wulite akụkọ
Tọọ mmemme nwere ike ịhazi ya dabere na ebumnuche
Akụkọ onye ọrụ OOB iji belata oge ahịa.
Mara ihe kacha mma omume kacha mma Tiketi
Nye ndị ọrụ gị Ọrụ onwe na-enweghị oke
A na-akwado mkparịta ụka Motadata AI site na nhazi ngwa mgbakwunye siri ike dabere. Ọ nwere ike ijikọ na sistemụ mpụga ọ bụla iji nye ọtụtụ ọrụ ọrụ iji nye ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
Ngwa mgbakwunye na akpaaka dabere na usoro ọrụ
Ejikọ na sistemu mpụta site na Webhook, API na script ahaziri
Mgbanwe na-enweghị ntụpọ n'elu ezigbo onye nnọchi anya
Mụbaa arụpụtaghị ihe
Belata oge ọ bụla iji dozie
Mee ka nke gị dịkwuo elu Nkuchi oche ọrụ
Ngwa mkpanaka Na-aga
3 Ụzọ akụkụ iji nye njikwa kacha mma nye onye na-arịọ arịrịọ, onye nkwado na onye ọrụ nka
Jikwaa arịrịọ IT niile na ndị na-abụghị IT site na iji interface nwere nghọta
Jikwaa usoro ndụ ngwụcha ruo ọgwụgwụ nke arịrịọ ọrụ
Welite oge & akụrụngwa site na Mee ngwa ngwa nnabata na njem
Mee ka onye ọrụ gị nwee ntụkwasị obi n'onwe ya site na iji ntọala Ọmụma na ngwa mkpanaka
Enwekwu Mmasị Ndị Ahịa
Wedata mmefu ego
MTTR kachasị mma
Ihe Onye Ahịa Anyị Na-ekwu Banyere
Ndị mmadụ na-ele Motadata anya dị ka ihe na - akpata ma ọ bụ akpata akpata inyocha nyocha. ọ karịrị nke ahụ. Ọ na - enye data oge na ntinye iji lebara okwu ụfọdụ anya tupu ha ebilite ma metụta ndị ọrụ njedebe. Nke a abụghịdị usoro iwu. Anyi enwetaala nke a site na ikpo okwu nke ozo.
Anil Nayer – AVP IT Kotak Securities
Belata olu tiketi wee bulie nrụpụta teknụzụ na Motadata ServiceOps ITSM Platform's Conversational AI.
Nweta onye ọrụ
Melite ahụmịhe onye sonyere ọhụrụ gị site na mkparịta ụka AI na-adị mgbe niile.
Hapụ arịrịọ na nnabata
Chefuru ụdị dabere na email wee hapụ njikwa site na ebe ọ bụla oge ọ bụla.
Isi okwu IT
Nweta ezi ike nke akpaaka yana bot iji dozie okwu IT ozugbo.
Kwado ndị ọrụ ohere ịnweta ntọala ọmụma na njem iji nyere ha aka inweta ozi ozugbo n'aka ha.
Ajụjụ ụgwọ ọnwa
Mee ka usoro ị nweta azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara ụgwọ ọrụ na ego maka ndị ọrụ gị.
Nyere ndị ọrụ gị aka ịza ajụjụ ndị a na-ajụkarị iji wepụta mkpebi ngwa ngwa.
Desktọpụ ọrụ IT, ntuziaka zuru oke.
Jikwaa mgbanwe na akụrụngwa IT gị
inyocha Ụlọ ọrụ ServiceOps
Ị nwere ajụjụ ọ bụla? Biko rịọ, anyị dị njikere ịkwado
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti Virtual Agents na Artificial Intelligence (AI)?
Ndị nnọchi anya mebere bụ ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa akpaghị aka. Ha nwere ike were ọrụ ọ bụla sitere na ịza ajụjụ ndị ahịa dị mfe ruo na idozi nsogbu IT nkịtị ma ọ bụ inyere ndị ọrụ njedebe aka na ajụjụ HR ha.
Teknụzụ onye nnọchi anya nke AI na-akwado ya. Enwere ụzọ abụọ a na-eji ọgụgụ isi eme ihe maka ndị enyemaka mebere:
AI na-enye ndị enyemaka mebere nghọta nke asụsụ mmadụ, ka ha wee nwee ike ịza ajụjụ ndị a ọnụ
AI na-enye ha ikike dịgasị iche iche ka e wee tinye ha n'ọrụ dị iche iche ma jikwaa mmekọrịta dị iche iche nke ndị ọrụ njedebe.
Kedu ihe dị iche n'etiti Agent Virtual na Chatbot?
Chatbots bụ ihe eji emekọrịta ihe nke ọgụgụ isi na-arụ ọrụ. Emebere ha ka ha zaa ajụjụ ndị ahịa, nye ozi gbasara ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ jikwaa ọrụ ndị ọzọ mmadụ na-ejikọkarị na ebe oku.
Ndị ọrụ mepere emepe na-enye otu ọrụ dị ka chatbots, mana ha na-emepe emepe n'ihe gbasara njirimara na ike ha. Enwere ike ịhazi ha ka ha nye nzaghachi ahaziri iche site na iji igwe mmụta algọridim na nhazi asụsụ eke.
Chatbots na mebere ndị ọrụ dabara n'ụdị sara mbara nke mkparịta ụka akpaghị aka (ACI). ACI na-enyere ụlọ ọrụ aka imezi ajụjụ nkwado ndị ahịa, mee ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịchọ ozi n'ịntanetị na ijikwa mkpọsa dijitalụ.